Farmaajo, Ayaa Amray in Saraakiisha Dhalinyarada ah in loo Dhiibo Hoggaanada Ciidanka. – STAR FM SOMALIA
Madaxweynaha Somaliya Maxamed C/laahi Farmaajo, ayaa amray in Saraakiisha dhalinyarada ah ee ka midka ah ciidamada Xoogga dalka Somaliya in loo dhiibo hoggaanada ciidanka, maadaama dhalinyaradaasi ay yihiin kuwa waxbartay.
Taliyaha Ciidanka Xoogga dalka Somaliya C/wali Jaamac Gorod oo la furay amarkaasi, ayaa durba shalay wuxuu kulan la qaatay Saraakiisha dhalinyarada ah ee ka tirsan ciidamada Xoogga dalka Somaliya.
Taliyaha ayaa wuxuu sheegay Madaxweynaha Somaliya inuu waydiistay in hoggaanada ciidanka iyo Talisyada qaybaha loo dhiibo Saraakiisha da’da yar ee tababarada ku soo qaatay dalalka dibada.
“Madaxweynaha wuxuu arkay Saraakiisha da’da yar ee dalalka dibadda tababarada ku soo qaatay, wuxuu i waydiistay in hoggaanada ciidanka loo dhiibo, waana isku waafaqnay.” Ayuu yiri Taliyaha Ciidamada Xoogga dalka Somaliya.
Generaal C/Wali Jaamac Gorod Taliyaha ciidamada Xoogga dalka Somaliya ayaa sheegay in Saraakiisha da’da yar ee ku jira Taliska Ciidanka Xoogga dalka Somaliya loo dhiibi doono hoggaanada kala duwan ee ciidamada.
Dhalinyaro badan ayaa ka tirsan ciidamada Xoogga dalka Somaliya, kuwaasi oo u baahan dhiiragelin Xooggan in loo sameeyo, maadaama ay yihiin kuwa dalka iyo dadka naftooda u huray.